यु,वराजको हात समाई दु-र्व्यवहार गर्ने प्र’हरीलाई कारबाही होस’: नायिका पुजना!:: Mero Desh
यु,वराजको हात समाई दु-र्व्यवहार गर्ने प्र’हरीलाई कारबाही होस’: नायिका पुजना!
Published on: २२ श्रावण २०७८, शुक्रबार १०:०५
काठमाण्डौं ।गत शुक्रबार साँझ काठमाडौँ को बीच सडक मा पूर्व युवराज पारस शाह र ट्राफिक प्र’हरीबीच वि’वाद भएको थियो।यो विवाद पहिलो पटक भने होईन। पारसले प्रहरीसँग झगडा ग’रिरहेको भि’डियो केही प्रत्यक्षदर्शी तथा सर्वसाधारण हरु ले सामाजिक सं’जालमा हाले पछि निकै
“भा’इरल बनेको थियो।त्यसपछि अधिकांशले पुर्व युवराज को दा’दागिरी भनेका छन भने केहिले राजाहरुको सम्मान गरिनु पर्छ भनेर समर्थन जनाएका छन।यस घटनामा सबैले आ-आफ्नै तर्क दिदै आएका छन् । “त्यस्तै चर्चित नायिका पुजना प्रधानले पनि पूर्व युवराज पारस शा”हको समर्थन
गरेकी छिन् । उनले पारसको हात समाउने र दु-र्व्यवहार गर्ने ट्राफिक प्रहरीलाई कारबाहीको माग समेत गरेकी छन उनि लेख्छिन, ‘तिम्रा लागी पूर्वयुराज होलान हाम्रा लागी त अहिले पनि युवराज नै हुन र भो’लीको राजा। हुन त नियम मा आफु बसे अरु पनि बस्ने हो तर अहिले सम्म कुनचाही
नेताहरु नियममा बसेका छन र हाम्रो युवराज बस्नुपर्ने?? युवराजको हात समाउने र दु-र्व्यवहार गर्ने ट्राफिकलाई अब कारवाही होस। राजा आउ देश वचाउ।शुक्रबार साँझपारस शाहसहित केहि व्यक्तिले हेल्मेट नल’गाई मोटर सा”इकल चलाइरहेको देखेपछि महाराजगंज चोकमा ड्युटीमा रहेका
ट्राफिकले उनिहरुलाई रोकेका थिए। ट्राफिकले रोकेपछि उनिसंगै रहेका केहिले गल्ति स्वी”कार गरेपनि पारस शाह भने झगडामै उ”त्रिएका थिए। निकै बेर प्रहरी पारश शाह विच भ’नाभनको स्थि’ति भयो र फेरि पछि सम्झाई बुझाई छाडेको थियो।